China Stiffening Nucleator BT-9801Z Manufacturer na Ngwaahịa | BGT
Na-agba ume Nucleator BT-9801Z
PITA-98C onye na-ekpo ọkụ
BT-9801Z bụ nke organic salts, nwere magburu onwe-achụsakwa, ezi chemical inertia na okpomọkụ kwụsie ike.
Ọ na-akpan eji maka eyi ihe onwunwe.
BT-9801Z enwere ike iji mee ka ikpo oku na-acha ọkụ nke PP na iji gbasaa ọsọ ọsọ, iji kwalite crystallization nke resin na imezi usoro nke ọka kristal site na ịnye kristal nuclei, ya mere ọ nwere ike meziwanye ngwa anya na arụmọrụ arụmọrụ nke ngwaahịa .
A na-etinye onye ọrụ a maka mgbanwe mgbanwe maka ngwaahịa PP ma kwenye dị ka kemịkal na-egbu egbu site na Mgbochi na Control Center nke Ọrịa ejikọtara na China.
Ihe bara uru:
White ntụ ntụ
Usoro onunu ogwu
10 n'arọ / akpa
Gịnị bụ Nucleating Ukwu?
Dị ka ihe ndozi maka polyolefin resin crystallization, Ngwunye Ngwunyenwere ike ime ka plastic ngwaahịa nwere ezigbo nhazi arụmọrụ na mma ngwa arụmọrụ. Iji nye egwuregwu zuru oke na uru nke onye ọ bụla na-ahụ maka ihe na-emepụta ihe, na afọ ndị na-adịbeghị anya, isi mmepe mmepe bụ ngwakọta nke Onye na-ahụ maka Nucleating. Enwere mmetụta synergistic dị mkpa nke inorganic, organic ma ọ bụ akụkụ dị iche iche nke Nucleattinye Onye ọrụ. Ngwakọta ọtụtụ ihe bụ ihe dị mkpa na mmepe nke mgbakwunye polymer nke oge a. Ka o sina dị, sorbitol based Nucleating Agent bụ ihe kachasị ewu ewu na ahịa ụwa maka oge ahụ.
CHINA BGT nwere ike na-enye zuru nso nke Onye na-ahụ maka ịgbanwu ihe, dị ka Onye na-akọwapụta ihe, Nnukwu ihe na-eme ka ihe sie ike na β-Crystal Nucleating Agent Enwere ike iji ngwaahịa ndị a na PP, PE, PET, PBT, NYLON, PA, EVA, POM na TPU wdg.
(Enwere ike inye TDS zuru ezu dị ka arịrịọ ọ bụla site na “Hapu Ozi Gi”)
Nke gara aga: Na-agba ume Nucleator BT-20
Osote: Na-agba ume Nucleator BT-9806
Ndị na-adịghị ísì ụtọ na-eme ka Nucleator
Stiffening Nucleator N'ihi Pee
White Na-agwụ ike Nucleator